सरकार र डा. गोविन्द केसी बीच पाँचबुँदे सहमति (यस्तो छ सहमती) : | Kendrabindu Nepal Online News
सरकार र डा. गोविन्द केसी बीच पाँचबुँदे सहमति (यस्तो छ सहमती) :
२९ पुष २०७४, शनिबार ०५:४८
सरकार र पाँच दिन देखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसी बीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सहमति पछि डा. केसीले आज (शनिबार) अनशन तोड्ने भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोरा नेतृत्वको टोलीसँग त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै डा. केसीले वार्ता गरेका थिए । वार्तामा सरकार र डा. केसीबीच पाँचबुँदे सहमति भएको हो । मन्त्री बोहोरा नेतृत्वको सरकारी टोलीमा गोविन्दराज पोखरेल र स्वर्णिम वाग्ले पनि सहभागी थिए ।
मन्त्री बोहोराले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको विषयमा फाइल मगाएको र थप छानबिनको काम हुने भएकाले अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग्दै अनशन थालेका डा. केसी विगत ५ दिन देखि अनसनरत छन् । सहमतिको पहिलो बुँदामा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समिति आजको मितिले ७ दिनभित्र गठन गर्ने उल्लेख छ ।
Prevकिन गरे, सौरभ ज्योतिले यस्तो घोषणा (भिडियोमा)
१९५० को सन्धि परिमार्जन गर्न भारत सहमतNext
स्वदेशी काठ काटेर उपयोग गर्नु भन्दा विदेशी काठ ल्याउन सजिलो छ : नवराज केसी (मयुर प्लाईउड कम्पनी)
विपन्न बस्तीमा न्यानो वाँढ्दै डा. गोविन्द केसी
डा. केसीसँगको सहमति अनुमोदन भयो
डा. केसीले अनसनलाई निरन्तरता दिने
सर्वोच्चबाट रिहा भए लगत्तै डा. केसी फेरि अनसनमा
के सोध्यो अदालतले, के जवाफ दिए केसीले ? डा. केसीले दिएको १४ प्रश्नको जवाफ यस्तो छ..